Shiinaha 167cm silikon raqiis ah oo jinsi ahaaneed oo caqli galmo leh naas weyn oo naasaha lagu ciyaaro ah oo loo yaqaan 'TPE silicon doll doll' oo loogu talagalay soosaarayaasha iyo alaabada nin | Shaoman
167cm silsilad raqiis ah oo jilicsan oo jilicsan oo jinsi ah oo leh naas weyn oo naasaha lagu ciyaaro oo loo yaqaan 'TPE' doll sex doll for nin
Miisaanka xirmada: 54.5kgs
Dhererka 167cm Sinta 105cm Qoto dheer siilka 17cm
Qoto dheer afka 12cm Gacan 69cm Qoto dheer futada 14cm
Garabka 38cm Timir 17cm Miisaanka saafiga ah 49kg
Naaska sare 96cm Lug 96cm Dhererka gacanta 16cm
Naaska hoose 66.5cm Cagta 21cm Dhexda 58cm
Su'aalaha guud ee robot doll caqli galmo
Q1 : Maxuu Keeni karaa Doll Doll oo buuxa ku adiga
Qaababka sawir qaadista, moodel fiican oo muuqaal qurxoon iyo muuqaal qurux badan leh
2.Hog iyo kool koolin wehel
3.Riyow saaxiib aan waligaa kaa tagin oo kaa fogeeya cidlada.
4.Sex function, had iyo jeer waa kuu diyaar oo wuxuu kuu samayn doonaa wax kasta oo galmo adag sida aad jeceshahay.
Q2; Sidee loo nadiifiyaa Doll-ka buuxa ee galmada kadib galmada?
Si aad u nadiifiso galmada kadib, waxaad u baahan doontaa biyo diirran, saabuun fudud ama saabuun saabuunta, sirinjiinka xubinta taranka haweenka ama xirmada dheecaanka leh (oo ay weheliyaan doll).
1. Galmada ka dib, dul dhig dusha sare ka hor nadiifinta.
2. Diyaarso xal nadiifin ah (biyo qandac ah + saabuun fudud / saabuun).
3. Si buuxda u nadiifi dhammaan godadka aad ka faa'iideysatay markii aad galmo sameysay oo ha hubin in saabuun ka hadhay godadka.
4. Robotka galmada ha hawo qallalan ka dibna ku isticmaal budada talcum ama budada budada ah.
5. Fadlan madaxa ha ku quusin biyo, fadlan isticmaal taar diiran oo qoyan haddii ay jirto wax wasakh ah.
Q3: Sidee loo ilaaliyaa Doll Doll oo buuxa?
1. Ka fogow walxaha fiiqan si aad u dalooliso caruusadda iyo qorraxda soo-gaadhista qorraxda si loo yareeyo nolosha.
2. Fadlan nadiifi dollada ugu yaraan 20-kii maalmoodba. U ogolow inuu ku qallajiyo hooska ka dibna isticmaal budo si aad uhesho caruusadda oo dhan markay qalajiso ka dib.
3. Dhar cad ama midab khafiif ah ayaa lagu taliyay in la xidho. Fadlan tijaabi dhar midab madow ah si aad uga fogaato nabar kasta oo ku dhaca maqaarka caruusadda. Waxaad isticmaali kartaa kareemka midab-tirtirka TPE-ga haddii aad leedahay wasakh.
4. Haddii ay jiraan wax dillaac ah ama goyn ah, fadlan hubso inaanu jirin wax xiisad ah oo u dhow jeexitaanka ama gooya ka dib markaad suuxsanayso xabagta TPE. Waxaa la toli doonaa nus saac kadib.
5. Fadlan ha u isticmaalin xoog aad u xoogan iyada marka aad sameyneyso muuqaal kala duwan oo ah cimriga dheer.
Q4: Miyaan qurxin karaa oo aan ku buufin karaa carabkayga Dahabka jinsiga oo buuxa?
Xaqiiqdii, qaar ka mid ah caruusadahayagu waxay la yimaadaan qurxiyo joogto ah laakiin waad ku dari kartaa qurxinta adiga kuu gaarka ah.
In kasta oo cadarrada qaar ay ku jiri karaan aalkolo dhaawici kara maqaarka, sidaa darteed waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad ku buufiso qayb qarsoon (sida kilkilaha) ama iska ilaali barafuunnada ay ku jiraan aalkoladu.
Hore: 160cm 5ft2 "Naasaha Cusub ee Nolosha Cusub ee ugu macquulsan Sexy Big Butts kululeeyo muujinta badan TPE Robot Sex Doll ee Ragga
Xiga: 169cm silsilad raqiis ah oo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan
169cm silikoon jaban oo jinsi ah oo caqli gal ah samee ...